Ayaş Road-Sincan OSB Ejiri Onwe Ya Nke Opupu Ulo | RayHaber
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraAyaş Road-Sincan OIZ
Ayaş Road-Sincan OIZ
27 / 07 / 2019 06 Ankara, Central Anatolia Region, General, Ụzọ Awara Awara, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Turkey
ayas ụzọ sincan osb ụzọ ụzọ mberede nọmba nke ụbọchị hapụrụ
Iji mezuo mkpa nke ndi okpu ego ma mee ka obodo di nma karie, n’etiti obodo na etiti ndi gbara ya gburugburu; Nlekọta okporo ụzọ, ụzọ mbido, paịlị mmanụ na ọrụ ihi ụzọ na-aga n'ihu n'Ọdụ Ime Obodo na-akwụsị akwụsị, n'otu aka nrute ma na-agagharị n'okporo ụzọ.
Obodo ukwu nke jisiri ike iwulite okporo ụzọ ọhụụ, ebe ụzọ na -emechi ọnụ ma na -echikwa anya n'ọtụtụ ebe nke obodo ahụ, rutere nso na ọrụ iwu “Ayaş Road-Sincan OIZ Front Underpass olan, nke bụ otu n'ime ọrụ ga-eku ume okporo ụzọ.
Ndị ọrụ 7 / 24 na-arụ ọrụ na ụzọ mgbapụta nke agbụrụ, nke a ga-eweta njem na-anaghị akwụsị akwụsị na Sincan Organised Industrial Mpaghara, nke ọtụtụ puku ụmụ amaala na-eji ụbọchị ọ bụla, mezue usoro nnabata nke nnukwu akụkụ nke amalite iwu na February.
Ndị ọrụ nke Ngalaba Na-ahụ Maka Ọchịchị nke Mọnịstrị, ogologo oge 562 na ntinye aka na ọrụ nke ndị ọkwọ ụgbọ ala na ndị njem n'ụzọ echekwabara na nke a ga-achịkwa ga-enye ụgbọ njem na-anaghị akwụsị akwụsị, kwuru na njupụta nke okporo ụzọ a ga-ebelata.
UGWU AHILL GHARA AFB TRRAF ỌR.
Törekent nwere ike banye n’ụzọ abụọ ahụ enyere na uzo dị na boulevard na-esonye na OIZ yana ọrụ mgbasawanye okporo ụzọ.
Na mkpokọta, 11 puku 650 usoro nke aspalt paving usoro a ga-arụ n'ọkụ dị n'okpuru, ụzọ, ụzọ, mgbochi, ala na ọrụ akụrụngwa na-aga n'ihu na ọsọ ọsọ. Törekent-Sincan OSB na Ankara-Ayaş ụzọ 3 ọpụpụ-3 ngụkọta ọnụ ọgụgụ nke ụzọ 6 na mmeghe nke uzo na ngụkọ, ebe ọnụọgụ nke ụbọchị ịbanye na ọrụ, ma okporo ụzọ mpaghara na ntopute okporo ụzọ ga-ezu ike.
Ayaş Road-Sincan OIZ Front N'okpuru owuwu owuwu…
Oputa okporo uzo Ayaş n’iru Sincan OSB mepere okporoko
Epeepe Eurasian mepeere maka ụbọchị emepe
Beypazarı Toboggan Ememme
Ngosipụta ọmịiko: Islahiye Level Crossing underpass ya
Nlere anya Okike: Fevzipaşa - Meydanekbez Line Islahiye…
New YHT ọdụ ụgbọ mmiri na Konya
E debere New Yht Station Passpass na Konya
95 nke Pasya New YHT Stationpass Completed
Ọgwụgwụ Okporo Ụzọ Awara Awara na OsB Road
IZBAN'da Kpoo Ụbọchị Left Hayat Monday Rails Ndụ Ga-akwụsị
Ofbọchị achụrụ àjà Kala, karagbọ Ankara…
Ayaş Road Sincan OSB